Fursado iyo Hanjabaado Wadajir ah oo ah Mashruuc Hal Waddo Hal Waddo ah | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Banaadir61 TrabzonFursado iyo Hanjabaado Wadajir ah oo loogu talagay Hal Mashruuc Hal Waddo Hal Waddo ah
11 / 11 / 2019 61 Trabzon, tareenka, GUUD, Gobolka Banaadir, Headline, TURKEY
jiil fursado iyo hanjabaado mashruuc waddo ah
Fursadaha iyo Hanjabaadaha Hal Mashruuc Hal Waddo ah; New Turkey, xiriirinaya Shiinaha Yurub "Mid ka mid ah Generation xoogayn doonaa booska uu ka mashruuc waddo in ay" ku biiro si caalamiga ah ee dunida.
Ku-xigeenka Rugta Jaamacadda Eurasia Dr. Ersan Bocutoğlu, Shiinaha dhigan ajandaha dunida, xira Europe qarni isticmaalaya Project Road a değerlendz Caspian aad Azerbaijan Georgia-Turkey--line Yurub, qaaradda 2 joogto ah, badda 2, 12 kun oo kiiloomitir oo waddo diirada 12 by jeer maalintii gaadhay. Tareenka, oo lagu soo dhoweeyay xaflad ka dhacday Ankara, ayaa loo adeegsaday markii ugu horreysay ee xiriir la leh khadka Tareenka ee Baku-Tbilisi-Kars iyo isku xirka Marmaray ee Mashruuca Wadada Wadnaha.
Shiinaha Railway Express Turkiga ay sabab u tahay marinka, dadweynaha ayaa soo saartay Belt a waxaa loo arkaa dhashay ee Shiinaha ayaa u baahan si ay u siiyaan macluumaad ku saabsan mashruuc waddo.
WAA MAXAY MACLUUMAADKA GUUD EE GUUD?
Iyada oo leh awood dhaqaale oo aan caadi ahayn oo ay heshay tan iyo sannadihii 1980, Shiinaha ayaa ku dhawaaqay "Hal-abuur Hal-Wadada Hal Waddo" ah oo loogu talagalay adduunka 2013. Hal Jiil Mid ah Hal mashruuc Waddo wuxuu matalaa soo nooleynta wadada xariir taariikhi ah ee Shiinaha ilaa Yurub; Tilmaamaha wadada ayaa ujeedadeedu tahay in la dhiso shabakad badeed oo soo gaarta Yurub dekedaha Piraeus ee Giriigga iyo Venice ee dalka Talyaaniga iyaga oo daboolaya Badda Jaalaha, Badweynta Hindiya, Badda Cas, Suez Canal iyo Badda Mediterranean-ka laga bilaabo Shiinaha.
Mashruuca Jiilaalka waa mashruuc kaabayaasha, isdhaafsiga, iyo kaabayaasha transcontinental, ganacsiga iyo mashruuca maalgelinta, in kasta oo xuduudaha juquraafi ahaan aan si cad loo qeexin.
Hal mashruuc oo loo yaqaan 'One Generation One Road' waa mashruuc bilyan oo 60 Doolar ah oo daboolaya in ka badan waddamada 1 waxaana ujeeddadiisu tahay inay Shiinaha ku xiraan qaaradaha Yurub iyo Afrika maal-gashiga kala duwan. Doorka ugu weyn ee maalgelinta mashruuca waxaa iska leh Bangiga maalgelinta Kaabayaasha Aasiya, oo ay xukumaan Shiinaha.
Hal Mashruuc Hal Waddo Hal Waddo ah ayaa ka kooban waddo weyn, jid-tareen, saliid iyo dhuumaha gaaska dabiiciga ah, khadadka gudbinta tamarta, dekedaha iyo mashaariicda kale ee kaabayaasha dhaqaalaha ee Shiinaha ku xiri doona adduunka.
Mashruuca Wadada Dheelliga ah wuxuu ka kooban yahay labo qeybood: Qeybta koowaad waa qeybta "Hal Belt" iyo "Silk Road Belt Belt midran oo ku nasaneysa salka dhulka. Suunkaani wuxuu Shiinaha ku xiri doonaa Bartamaha Aasiya, Bariga iyo Bartamaha Yurub. Qaybta labaad waa “21. Silsiladdii Silk Marine Century Marine ”waxay ku taal dabaqa badda. Waxay ku xiraa Shiinaha illaa Koonfur-bari Aasiya, Afrika iyo Yurub. Mashruuca waxaa kamid ah wadada isku xirta xNUMX dhaqaalaha dhulka iyo xadka dhaqaalaha badda ee 6.
Wadooyinka dhaqaalaha ee dhulka;
a) Buundada New Eurasia Land Bridge oo ay la leedahay Galbeedka Shiinaha illaa Bariga Ruushka,
b) Sino-Mongolian-Russian Corridor iyo Waqooyiga Shiinaha illaa Mongolia illaa Bariga Russia,
c) Shiinaha-Central Asia, waddada West Asia dhex West Asia iyo galbeedka Shiinaha, Iran, Turkey iyo Europe,
d) Wadada isku xidha Sian-Indian Peninsula Corridor iyo Koonfurta Shiinaha iyada oo loo sii marayo Turkiga-Shiinaha ilaa Singapore,
e) Sino-Pakistan Corridor iyo Koonfur-bari Shiinaha Shiinaha oo sii mari doonta Pakistan iyo Badweynta Hindiya iyada oo loo sii marayo Pakistan,
f) Wadada Bangladesh-China-India-Myanmar Corridor waxay isku xirtaa Koonfurta Shiinaha ilaa Hindiya iyadoo loo sii marinayo Bangladesh iyo Myanmar.
Jidka dhaqaalaha ee badda ayaa isku xira xeebaha / dekedaha Shiinaha illaa Afrika iyo Yurub iyada oo loo sii marayo Kanaalka-Malaysia-Indian Ocean-Red Sea-Suez Canal-Mediterranean.
Waddooyinka Dhulka (Khadka Cas) iyo Waddooyinka Badda (Khadka Buluugga ah) ee 'Mashruucan Hal Wadani Hal Waddo ayaa lagu muujiyey khariidadda hoose.
GUUD-KA-MASHRUUC MADAXDA IYO DHAQAALAHA
Waxa jira taageerayaal, aqoonyahanno iyo kuwa ka soo horjeeda Mashruuca One Way One Way ee adduunka.
1. Taageerayaasha Mashruuca Wadada Kowaad
Shiinaha, Iran, Pakistan In kasta oo ay jiraan in kabadan dalal 60 ah oo taageeraya mashruucan, haddana waxaa la dhihi karaa in taageerayaasha ugu weyn ee mashruucu ay badankood yihiin Shiinaha, Iran iyo Pakistan. Waxaa la dhihi karaa Iran waxay u aragtaa mashruuca inuu yahay gaashaan ka dhan ah Mareykanka iyo Pakistan oo gaashaan ka ah Hindiya.
2. Kuwa ka soo horjeeda mashruuca Jiilaalka: Hindiya, Japan, USA, India
Sino-Pakistan Corridor Corridor wuxuu ka soo horjeedaa mashruuca maxaa yeelay Hindiya waxay soo marisaa gobolka Kashmir ee ay gacanta ku heyso Pakistan, taas oo caqabad ku ah madaxbanaanida Hindiya iyo xasiloonida dhuleed, maalgashiga Shiinaha ee Badweynta Hindiya, mashruuca ku xeeran Hindiya oo aan daah furneyn. Japan, oo u maleyneysa in mashruucu u rogi doono xaalad juqraafi ahaan waqti dhexaad iyo mid dheerba, ayaa Japan gelin doonta xaalad dhaqaale iyo juqraafi ahaan falanqaynti ugu dambeysay, sidoo kale waxay si wada jir ah ula shaqeyneysaa Hindiya oo ka soo horjeedaa mashruuca. Waxay taageertaa hindisaha Mareykanka iyo Hindiya ee ka dhanka ah Hindiya, kaas oo si dhow ula socda mashruucan, isla markaana wuxuu ka mid yahay kuwa ka soo horjeedda mashruucan iyadoo leh dhaqankan.
3. Ka-reebista mashruuca Jiilaalka: Ruushka, Midowga Yurub
In kasta oo Ruushku u taagan yahay inuu yahay mid ka mid ah la-hawlgalayaasha ugu waaweyn ee mashruucu, haddana wuxuu ka baqayaa cawaaqib-xumada muddada-dheer ee mashruuca. Iyada oo leh soosaaritaankeeda xadidan, dhul ballaadhan, saliid aan xadidnayn, gaaska dabiiciga ah, macdanta iyo agabyada kale ee ceyriinka ah iyo tirada dadka oo hoos u dhacay, Ruushka wuxuu tixgelinayaa suurtagalnimada bartilmaameedka isbeheysiga Shiinaha mustaqbalka fog, isagoo ka taxadaraya mashruuca kana hor-istaagaya mashruuca inuu hanjabaado Ruushka. sidoo kale waa horumar. Habka ay raacaan Ruushka ee laxiriirta mashruuca ayaa ah aragtida bulunyadu ku jirto, hubiso oo ka hortag haddii loo baahdo ”.
In kasta oo Midowga Yurub uu u saxeexday Agenda istiraatiijiyad N 2020 istiraatiijiyad iskaashi ah oo ay la yeelanayaan Shiinaha, welwelka laga qabo in ganacsiga ay kabto Shiinaha ayaa horseedi doonta tartan aan caddaalad ahayn oo ka dhan ah waddamada Midowga Yurub oo aan wali la xallin. Si kastaba ha noqotee, Midowga Yurub wuxuu tixgelinayaa fursadaha lagu abuuri karo mashruucu. Laba ka mid ah daciifnimada Midowga Yurub ayaa ah in aysan laheyn awood millatari oo ay wadaagaan oo aysan laheyn siyaasad dibadeed oo caadi ah. Sidaa daraadeed, in kasta oo Ajenda Istaraatiijiyadeed ay ku saxiixday Midowga Yurub mashruuca, waxaa la dhihi karaa in xubnaha ururka aysan laheyn aragti guud oo wadan walba oo xubin ka ah uu sameeyo shaqsiyaad gaar ah qeybta mashruuca.
ONE SOCDO MASHRUUCA Abuurida IYO TURKEY
Turkey maal-galin doona mashruuca, taas oo ahayd co-aasaasaha Kaabayaasha Asian Bank Investment, ee Shiinaha, ayaa ku biiray One-Jidka Summit Belt ula lug leh mashruuca. khasaaraha ka mid ah kalsoonida sokeeye galbeedka Turkiga ee toban sano ee la soo dhaafay, West ayaa isaga riixay in ay raadsadaan taageero ka Russia iyo Shiinaha in lagu miisaamo dunida. baxaya Turkey ee Asia this quwad cusub dhaqaale ee mashruuca la baxay baxsan a line lagu kalsoonaan karo oo Iran (China-Central Asia-Caspian Sea-Azerbaijan-Georgia-Turkey) si ay u gaaraan fursad in ay dib Turkey si Central Asia, Shiinaha Republic Turkish ah ' e. Si kastaba ha ahaatee, iyada oo mashaariicda dhaqaale ee Shiinaha ayaa kor u kacay in ka badan Republic Turkish ah, Turkey ee geopolitical iyo in mowjadda saameynta dadweynaha waxaa iska cad in ay jirto baahi loo qabo in iskaashi dhow la Russia. Tani waa mid ka mid ah arrimaha ka dhigtay Ruushka jahwareerka ku saabsan mashruuca, iyo laga yaabee midka ugu muhiimsan. xiriirka Turkey-Shiinaha horumarinta muhiimadda doorka ay ku ciyaaraan Gobolka Banaan Uighur arrimood waa in la ogaadaa in uu leexan.
MAAMULKA JAMHUURIYADDA GUUD IYO XARUNTA ASIAN TURKISH REPUBLICS
Juquraafi ahaan, Jamhuuriyadda Bartamaha Aasiya ee Turkic Republic ayaa ku jira wareegga koowaad ee mashruuca. In kasta oo ay caddahay in saameynta sii kordheysa ee Shiinaha oo ah quwad dhaqaale ayaa laga dareemi doonaa adduunka oo dhan, haddii mashruucu uu guuleysto ama uu guuldaraysto, Jamhuuriyadda Turkiga ee wareegga koowaad ayaa dhibaatada ugu badan la kulmi doonta. Kordhinta saameynta dhaqaale ee Shiinaha ee dhexdhexaadka iyo muddada dheer, dhaqdhaqaaqa xorta ah ee badeecadaha, lacagta iyo shaqada waxay leeyihiin awood ay ku carqaladeeyaan isu dheelitirka dadweynaha ee Jamhuuriyadda Turkiga.Xasiloonida Jamhuuriyadda Jamhuriyadda Turkiga, oo ah aag soo goyn u dhexeeya Ruushka iyo Shiinaha, kaliya maahan jamhuuriyadan, laakiin sidoo kale amniga Russia. Kaliya maahan arin ay jamhuuriyada turkiga kaligood ka adkaan karaan. Russia on arrintan waa in la tixgeliyaa in ay jirto baahi ah ee iskaashi dhow ee Turkey iyo Republic Turkish ah.
MAAMULKA GUUD EE MASHRUUCKA IYO KHUDBADAHA
Xurguftii ka dhaxaysay Maraykanka iyo Iran, sida Generation a wiiqi isticmaalka Project Road ka Iran ee la soo dhaafay waddada West Asia, Shiinaha halkii waddada this, waxay jecel yahay waddada Shiinaha-Kazakhstan-Azerbaijan-Georgia-Turkey-Europe. xaaladda Tani waa faa'iido istaraatiijiga ah ee dalkeenna, Turkey waa dhow jidh Jamhuuriyadaha Turkish Asian Dhexe. Qarni A of West Asia, ee kala duwanaansho Project Corridor Sea Caspian ee Jidka loo marayo Turkey, inkastoo, in lagugu xiro dekedaha ee Trabzon, Turkey Railway Network waxaa u dhimeysa mashruuca lacagta ka Gobolka Eastern Badda Madow. Sidaa darteed, ee xidhiidhinaya Trabzon dahabka, Turkey Railway Network ayaa mar kale ka dhaansado waa wanaagsan yahay.
Mashruuca jiilka A waa iskaashi dhaqaale oo muddo gaaban iyo kuwa dhexdhexaadka ah ee mashruuca waddo, iyada oo la tixgelinayo khataraha ugu mudada dheer geopolitical keeni kara, muhiimadda haysashada qorshe kale oo ku saabsan mashruuca Turkey ayaa ka weyn. Turkey inaad ka qayb qaadato mashruuca wadada jiilka a a, iyadoo ay sabab u, waa tallaabo istiraatiiji ah in xoogayn doonaa xaaladda cusub ee Turkey ayaa caalamiga ah. "(afuufeen)
Qorshee isbeddel ku yimaada agagaarka Boğazköprü oo leh wadada, xarunta saadka iyo tareenka
Meelaha ugu Adag ee Mashruuca Road Road
Skiing iyo Salaadda ee Uludağ
Bolu waxaa la kulma laba xilli oo isku xiga
Isku darka dabiiciga ah ee barafka iyo barafka ee Salda
Laba Xilliga Bolu
Laba xiddigood oo Marmaris wada jira
Muddo sadex sano ah ayaa lagu bilaabay İzmir
Isku-duwaha magaalada caasimadda ee 3
Pegasus Airlines waxay bixisaa fursadaha jabitaanka gu'ga
Mashruuc hal jaan ah hal mashruuc
Professor Dr. Ersan Bocutoğlu
network tareenka Turkey
Çambaşı Ski Center oo leh Village Fasax Tuulada Fasaxa lagu aasaasayo